I-MBP: Umhlinzeki we-Micro-Blogging and Protocol | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 13, i-2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Nina bantu kungenzeka ukuthi nifunde nge-tiff isikhashana emuva phakathi URobert Scoble kanye ne-Twitter. UScoble uhlangane neTwitter waxazulula isimo. Abanye abantu bakhuluma ngemodeli yebhizinisi enalezi zinsizakalo zokubloga okuncane lapho abasebenzisi abadumile bakhokhela insizakalo.
Ngingathanda impela ukuhambisa isiphakamiso esingcono futhi lokho kungokwamapulatifomu enetha le-micro-blog (Umngani, Tumblr, Jaiku, Twitter, amandla, Okuthulile, IBrightkite, Inqwaba, I-Qik, njll.) ukunquma ngeProthokholi ye-Micro-Blogging. Zonke lezi zinsizakalo zingabe seziba abahlinzeki be-Micro-Blogging.
Iselula, ividiyo, umsindo, izixhumanisi, okunamathiselwe, izithombe, nemiyalezo konke kungaqukethwe kumthetho olandelwayo owodwa, ohlanzekile. Ikhono 'lokulandela' lingasetshenziswa kuwo wonke amapulatifomu. Ipulatifomu ngayinye ingahluka komunye kumathuluzi wabo wokusebenzisa nakuma-interface, kepha umthwalo nokuthandwa kwabanye ngaphezu kwelinye kungaqala ukusakazeka. Akuwona wonke umhlinzeki okufanele asekele imidiya ehlukile. Lokhu kuzohlinzeka isikhathi esengeziwe sokusebenzisa futhi abasebenzisi bangadonsela ekusetshenzisweni kwamakhasimende abawathanda kakhulu.
Akuyona indlela yenoveli - kungafana nokuthi abahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi benze nge-imeyili. Ngingasebenzisa noma yiliphi iklayenti engingalithanda futhi ngixhumane nomuntu wonke ohlwini lwami loxhumana nabo.
Ngakho-ke unayo - isikhathi se-Micro-Blogging Protocol embonini! Futhi asishayele abahlinzeki abahlinzeki be-Micro-Blogging. Masenze lokhu kube lula kumthengi!
UJun 13, 2008 ngo-11: 59 AM
I-XMPP uzokwenza kahle.
Jun 13, 2008 ku-2: 45 PM
Uyawuthanda lo mbono, ngiyazibuza ukuthi ngabe kuyoke kwenzeke yini?
Jun 13, 2008 ku-6: 37 PM
Ukubhloga okuncane kufanele kube insizakalo edidiyelwe lapho abasebenzisi bazokwazi ukuyisebenzisa njengokuthumela imiyalezo ngobuningi (ukuvuselela bonke abangane), ibha yomumo kumanethiwekhi omphakathi (njengokusebenza kwesimo seFacebook), kanye nesiginesha ye-imeyili.
UJun 16, 2008 ngo-1: 46 AM
Kuzwakala kungumbono omuhle, ngaphandle kokuthi okungenani umuntu oyedwa ngamunye phakathi kwalezi zinkampani eziningana kuzodingeka athathe ubuholi ukuze akwenze kwenzeke. Kungenzeka ukuthi ngiyaqala ukungabaza, kodwa ngibonile izinto eziningi ezihlobene ezingenzeka kepha angibonanga ukuthi lokhu kwenzeka, okungenani kuze kube yilapho umbhemu onjengoGoogle esungula umthetho olandelwayo bese ethi “wonke umuntu uyayilandela, noma kungenjalo. ” Uxolo ngokungabi nethemba, kepha uma ulunywe kabili unamahloni.
I-BTW, angiqiniseki ukuthi uqaphele yini kodwa ngigcine ngishintshile ibhulogi yami ku-WordPress ngemuva kokuzimela okucishe kube unyaka. bekade ngi elinde Okwesikhathi (kanye nogqozi) ekugcineni lokushintsha kusuka kwisoftware yami yakudala ebese iba nenkinga yokuthi bekufanele. Manje sengingenza okungaphezu kokuphawula nje kubhulogi yakho nakwabanye; Ngingaqala ukubhuloga futhi!
I-FYI, eyakho ingenye yamabhulogi amathathu (3) engiwabalile njengalandela ngenkuthalo njengamanje. Ngicabanga ukuthi kungenzeka ngingeze esinye isigaba se-blogroll se- “Ama-Blogs ngingawalandela uma nginesikhathi kuphela!”Kuwo wonke amanye amabhulogi amahle laphaya. '-)
UJun 16, 2008 ngo-8: 42 AM
Iqiniso liyatshelwa, bengingakafundi kangako amabhulogi (ngiyawathanda) njengoba kufanele. Kwesinye isikhathi umsebenzi ungena endleleni;).
Ngiyabonga ukwesekwa futhi ngiyakwamukela kubhulogi, Mike!
Jun 16, 2008 ku-4: 13 PM
Uma ngikhuluma iqiniso angiboni ukuthi umuntu unesikhathi sokufunda amabhulogi amaningi. Lapho ngivumela ukuhamba isikhathi lapho ngingatholi lutho khona bese ngizizwa kabi ngami ngokwenza njalo. Lapho-ke uma ngikwazi ukuzivumela ukuthi ngingene engxoxweni (funda “impikiswano”) kulapho iba yinkinga yesikhathi. Angazi ukuthi abantu abaqashwe ngokunenzuzo bakwazi kanjani ukuthola isikhathi sako.
Kepha esinye sezizathu esenza ngiqhubeke nokufunda kwakho ukuthi, ngezihloko ezingithandayo, esakho siphezulu kakhulu kusiginali "yesiginali" kunesilinganiso "somsindo" kunamabhulogi amaningi. Kudos.